Kutholakalela ukulanda iFirefox 9 | Kusuka kuLinux
Kutholakala ukulanda iFirefox 9
Njengokwesiko, singathola kufayela le- FTP de I-Mozilla ukulanda inguqulo IFirefox 9, yize isimemezelo esisemthethweni singakenziwa.
Izindaba ziza kimi zisuka I-blog yomngani we-GEspadas, lapho isinikeza imininingwane eminingi yezindaba maqondana ne-algorithm entsha ye I-Java Script isetshenziswe kule nguqulo ethembisa ukushesha kakhulu. Ngizokutshela uma ngiyilanda bese ngiyazama 🙂
Yize kungekho intuthuko efanele ngokuya kwesixhumi esibonakalayo, uma kungezwa okunye ukuthuthuka njengokusebenzisa isikrini esigcwele, okuba lula ngokwengeziwe ukudlala noma ukubukela amavidiyo njengoba sibona ku lesi sibonelo yize kuyi-API yokuhlola okwamanje. Kungezwe ukusekelwa kwamalebula CSS3 nokuthuthuka ku- I-HTML5.
I-Firefox 9 ukuze Linux de Ama-32 Bits:
En isi-Español de España (es-es)
En inglés de United States (e-U.S)
I-Firefox 9 ukuze Linux de Ama-64 Bits:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Kutholakala ukulanda iFirefox 9
Huy ngisanda kukhuphukela ku-8 futhi sesivele siku-9 ye-mania mozilla!
Okufanayo ngu .. U_U
Lokhu kubangelwa uma uzama ukuhambisana ne-Google ...
Sengivele ngivuselelwe 😀
Nge-Ubuntu zokugcina? Hawu, bekushesha lokho ..
Okubi ukuthi ama-plugins amaningi akhutshaziwe.
Akukho lutho oluvela kimi eKubuntu okwamanje O_O
Ake sizame ukubona ukuthi kuhamba kanjani
I-QupZilla: Esinye isiphequluli se-GNU / Linux ne-Windows
I-Troubleshoot Realtek RTL8111 / 8168B ku-LMDE